Amanqaku kaSenraj Soundar Martech Zone |
Amanqaku ngu Senraj Isandi
Emva kokuba uWatson waba yintshatsheli yeJoopardy, i-IBM yadibana neKlinikhi yaseCleveland ukunceda oogqirha bakhawulezise kwaye baphucule amazinga okuchaneka kokuchongwa kwabo kunye nemigqaliselo. Kule meko, uWatson wongeza izakhono zoogqirha. Ke, ukuba ikhompyuter inokunceda ekwenzeni imisebenzi yezonyango, ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi umntu unokunceda kwaye aphucule izakhono zomthengisi ngokunjalo. Kodwa, ngaba ikhompyuter iya kuze ithathe indawo yabasebenzi abathengisayo? Ootitshala, abaqhubi, iiarhente zokuhamba, kunye